Bible Mu Nsɛm Yeriko Afasu No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
DƐN na ɛrema Yeriko afasu yi abubu? Ɛte sɛ nea wɔatow ɔtopae anaa bɔmb kɛse bi wɔ hɔ. Nanso saa bere no na bɔmb nni wiase; na wonni atuo mpo. Ɛyɛ anwonwade foforo a Yehowa yɛe! Ma yɛnhwɛ sɛnea ɛbae.
Tie nea Yehowa ka kyerɛɛ Yosua: ‘Wo ne wo dɔm no ntwa kurow no ho nhyia. Muntwa ho nhyia pɛnkoro nnansia no da biara. Momfa apam adaka no nka mo ho. Ɛsɛ sɛ asɔfo baason di anim na wɔhyɛn wɔn mmɛn.
‘Da a ɛto so ason no muntwa kurow no ho nhyia mpɛn ason. Afei monhyɛn mmɛn no denneennen, na afei obiara nhuro mmɔ ose kɛse. Na afasu no bedwiriw agu fam!’
Yosua ne ɔman no yɛɛ nea Yehowa kae no. Bere a wotwa ho hyia no, obiara yɛɛ koom. Ná nea wɔte ara ne mmɛn no ne nan ase nnyigyei. Ɛbɛyɛ sɛ ehu kaa atamfo a na wɔwɔ Yeriko no. Wuhu hama kɔkɔɔ a ɛsɛn mfɛnsere no mu no? Hena mfɛnsere ne no? Yiw, Rahab ayɛ nea akwansrafo baanu no kae sɛ ɔnyɛ no. N’abusuafo nyinaa hyɛ ne fie hɔ rehwɛ.
Awiei no, da a ɛto so ason, bere a wɔatwa kurow no ho ahyia mpɛn ason no, mmɛn no hyɛnee, akofofo no huro bɔɔ ose na afasu no bubui. Afei Yosua kae sɛ: ‘Munkum obiara a ɔwɔ kurow no mu nhyew no. Monhyew biribiara. Emu dwetɛ, sika, kɔbere ne dade nko na momfa nkogu Yehowa ntamadan adekorabea hɔ.’
Yosua ka kyerɛɛ akwansrafo baanu no sɛ: ‘Monkɔ Rahab fie, na monkɔfa ɔne n’abusuafo nyinaa mmra.’ Wogyee Rahab ne n’abusuafo nkwa, sɛnea na akwansrafo no ahyɛ no bɔ no.
Dɛn na Yehowa kae sɛ akofofo no ne asɔfo no nyɛ nnansia?
Dɛn na na ɛsɛ sɛ mmarima no yɛ da a ɛto so ason no?
Sɛ wohwɛ mfonini no a, Yeriko afasu no reyɛ dɛn?
Adɛn nti na hama kɔkɔɔ bi sɛn mfɛnsere no mu?
Yosua ka kyerɛɛ akofofo no sɛ wɔnyɛ nkurɔfo no ne kurow no dɛn, na dwetɛ, sika, kɔbere ne dade no nso ɛ?
Dɛn na wɔka kyerɛɛ akwansrafo baanu no sɛ wɔnyɛ?
Kenkan Yosua 6:1-25.
Ɔkwan bɛn so na sɛnea Israelfo twaa Yeriko ho hyiae da a ɛto so ason no ne sɛnea Yehowa Adansefo yɛ asɛnka adwuma no wɔ nna a edi akyiri yi mu no di nsɛ? (Yos. 6:15, 16; Yes. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kor. 9:16)
Ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ a ɛwɔ Yosua 6:26 no baa mu wɔ mfe 500 akyi, na dɛn na ɛkyerɛ yɛn wɔ Yehowa anom asɛm ho? (1 Ahe. 16:34; Yes. 55:11)